Aluminium Perforated Plate Factory - China Aluminium Perforated Plate Manufacturer, mpamatsy
Takela-by aluminium madio
Noho ny akora samihafa amin'ny takelaka aluminium, ny takelaka takelaka aluminium dia azo zaraina ho takelaka vita amin'ny aliminioma sy lovia firaka vita amin'ny alimo. Misy naoty 8 vita amin'ny takelaka aluminium, ny sokajy voalohany dia ravina aluminium tsy misy fangarony raha 3 hafa kosa dia takelaka firaka aliminioma. Ny takelaka takelaka aluminium dia tsy mitovy, tsy mitovy ny fananana, ny asany ary ny anton-javatra hafa mazava ho azy.
Takelaka alimina haingon-trano
Ny takelaka takelaka aluminium dia be mpampiasa, ao anatin'izany ny indostria isan-karazany eo amin'ny fiarahamonintsika. Ny takelaka firaka vita amin'ny aliminioma mahazatra amin'ny alàlan'ny fanodinana tsotra dia afaka mitana andraikitra lehibe kokoa. Ny takelaka alimina haingon-trano no karazany malaza indrindra amin'ny olona.
Ny Sheet Perforated Aluminium dia maivana kokoa noho ny ravin-koditra vy sy vy tsy misy fangarony, raha manohitra ny fanoherana ny harafesina, ny fahamendrehana ary ny endriny. Ny ravina perforated aluminium dia misy haben'ny lavaka, tohotra ary hatevin'ny ravina.
Takelaka tantely tantely
Taratasy tantely tantely dia ravina aluminium hafa mitambatra. Ny tabilaon'ny tantely tantely dia takelaka mitambatra vita amin'ny alim-bolan'ny alim-pito. Ny akora vita amin'ny tantely tantely tantely dia ny alim-pito alimika 3003 na 5000 misy andiana aluminium.